Shiinaha Mashiinka Dhalada Mashiinka Mashiinka Mashiinka buuxiya iyo alaab-qeybiyeyaasha | Higee
Khadkeena mashiinka buuxinta khamriga wuxuu iskuxirayaa mashiinka dhalada, buuxinta iyo mashiinka mashiinka hal mashiin monoblock. Nidaamyada waxaa si toos ah loogu fuliyaa si toos ah.
Ku Tartam Dhalada Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Monoblock Production Line
1.Screw Feeder ee Dhalada Dhalada ah
Mashiinka Dhajinta iyo Mashiinka Mashiinka Dhajinta Dhalada ah
mashiinka buuxiya wiishku wuxuu isku darayaa dhaqida dhalada, buuxinta wiishka iyo ku xirida hal monobloc, saddexda geeddi-socodna si toos ah ayaa loo fuliyaa. Waxaa loo isticmaalaa buuxinta biyaha macdanta ah, biyo saafi ah, iyo cabitaan kale oo aan kaarboon lahayn (Sida whiskeyga). Walxaha korantada, waxaan u adeegsanaa Mitsubishi, Omron, Schneider, Airtac, iwm kuwaas oo ah nooc caan ah oo leh tayo la hubo. Cunsur kasta oo mashiin ah oo dareeraha la xiriira wuxuu ka sameysan yahay bir bir sareysa oo birta ah. Qaybaha muhiimka ah waxaa lagu sameeyaa aaladda mashiinka nambar ahaan loo xakameeyo, xaalada mashiinka oo dhan waxaa lagu ogaadaa dareeraha sawir qaadaha, dhalo aan buuxin, dhalo aan waxbo la jarin. Waxay ku jirtaa faa'iidooyinka otomaatiga sare, hawlgalka fudud, iska caabinta wanaagsan ee wanaagsan, xasiloonida sare, heerka fashilka hooseeya, iwm. Tayada ayaa gaadhaysa heerka caalamiga ah ee horumarsan. Waa xulashada ugufiican maalgashadayaasha khadka wax soo saarka cusub iyo tan duug ah.
Structure Qaab dhismeedka gudbinta qoorta oo dhalada la gooyo, gaarsiinta dhalada way deggan tahay; aad u habboon oo deg deg ah in loo isticmaalo dhalooyin kala duwan oo lagu buuxinayo isla mashiinka adoo hagaajinaya dhererka xamuulka iyo dhowr qaybood oo isweydaarsi ah.
Theory Aragtida buuxinta cuf isjiidadka, xawaaraha buuxinta waa dhakhso oo saxsanaanta ayaa sareysa; heerka buuxintu waa la hagaajin karaa.
Hore: Mashiinka Buuxinta Dhalada Beerka ah
Xiga: Nidaamka daweynta biyaha